အက်ပလီကေးရှင်းအကြံပြုချက်များကို Safari တွင်ပိတ်နည်း။ | ငါက Mac ကပါ
ဘယ်မှာ၏ရှာဖွေရေးဘား၌တည်၏ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း သင်အချို့ကိုက်ညီတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုရေးပါ applications များ သော၌ရရှိနိုင်ပါသည် အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး အက်ပလီကေးရှင်းမှဘရောက်ဇာကထိုအက်ပလီကေးရှင်းကိုအလိုအလျောက်အကြံပြုလိမ့်မည်၊ ထိုအကြံပြုချက်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်၏အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်ဒ်သို့မဟုတ်အိုင်ပေါ့ဒ်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်အောင်ဖွင့်လိမ့်မည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ထားသည်။ သို့သော်သင်စိတ်မ ၀ င်စားပါက (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်မပါ ၀ င်ပါ) ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအလွယ်တကူပိတ်နိုင်သည်။ ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်။
မသန်စွမ်း အက်ပလီကေးရှင်းအကြံပြုချက်များကို Safari တွင်ပိတ်ပါ en iOS9သငျသညျဤရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာရန်ရှိသည်:
သင့် iPhone ပေါ်ရှိ Settings အက်ပ်ကိုဖွင့ ်၍ ရွေးပါ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း.
ယခု၊ « Safari အကြံပြုချက်များ»တွင်ဆလိုက်ဒါကိုပိတ်ထားပါ။
လိမ္မာပါးနပ် !!! ဒီအခိုက်အနေ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း ၎င်းသည် App Store မှအက်ပလီကေးရှင်းများကိုသင့်အားအကြံပြုတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်?
နေ့တိုင်း Applelizados ၌သင်၏ကိုက်နေသောပန်းသီးထုတ်ကုန်များ၊ iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch နှင့် Mac အတွက်အကြံပေးချက်အသစ်များကိုနေ့တိုင်းပို့ဆောင်ပေးနေသည်ကိုသတိရပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tutorials section ကိုသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iOS ကို » Safari တွင်အက်ပ်အကြံပေးချက်များကိုပိတ်နည်း
Apple က iTunes Match မှာသီချင်းတွေကိုကန့်သတ်လိုက်တယ်